चितवनमा ब्लग बनाउने पहिलो पत्रकार म नै हुँ- सुर्यप्रकाश कँडेल - MeroReport
चितवनमा ब्लग बनाउने पहिलो पत्रकार म नै हुँ- सुर्यप्रकाश कँडेल
छापा पत्रकारितामा क्रियाशील सुर्यप्रकाश कँडेल, विगत १६ वर्षेदेखि चितवनमै रहेर पत्रकारिता गरिरहेका छन् । विगत ११ वर्षेखि अन्नपूर्ण पोस्टमा कार्यरत सुर्यको जन्म भने ३८ बर्षअघि गुल्मी जिल्लाको अर्लाङकोट गाविसमा पर्ने डाँसिकोट भन्ने ठाउँमा भएको हो । वाणिज्यशास्त्रका विद्यार्थी भएपनि लामो समयसम्मको पत्रकारिताको अनुभव र विभिन्न समयमा लिईएका तालिमका कारण मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गर्ने अनुभवी पत्रकारहरुका रुपमा उनी पनि चिनिन्छन् । पत्रकारिताका अलावा फोटोग्राफीमा समेत उत्तिकै रुची राख्ने सुर्यले आफ्नो ब्लगमा आफूले खिचेका राम्राराम्रा तस्विरहरु राखेका छन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै सुर्यलाई प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसंगको कुराकानी:
सोसल मिडियामा आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ, पत्रकार कि एउटा ब्लगरका रुपमा मात्रै?
सोसल मिडियामा त एउटा ब्लगर नै भन्न रुचाउँछु । तर, मेरो प्रमुख क्षेत्र भनेको त पत्रकारिता नै हो । ब्लगको सहायताले पनि पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । ब्लगले न्यू मिडियाको रुपमा काम गर्ने भएकोले ब्लगिङ आफैँमा एउटा नयाँ पत्रकारिता हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाँइको ब्लग http://suryakoblog.blogspot.com/ मात्रै कि अरु पनि छन?
मैले सुरुमा ब्लग बनाउन सिक्ने क्रममै दुई, तीनवटा ब्लग बनाएको थिएँ । पत्रकारितामा नियमित व्यस्तता रहने भएपछि अहिले सुर्यको ब्लगमात्र अपडेट गर्ने गरेको छु । यो बाहेक देशबुक डट ब्लगस्पट डट कम मेरो अर्को ब्लग पनि छ । कुनै समय नियमित अपडेट हुने त्यो ब्लग हालका दिनमा अपडेट गर्न भ्याएको छैन ।
यहाँको ब्लगिङको रुचीको बिषय के हो?
सुरुसुरुमा ब्लगिङ गर्दा निजी विचार र भावनाहरु अनि केही समाचार सामग्रीहरु पनि ब्लगमा राख्न मन लाग्थ्यो । सुरुवात त्यसरी नै भएको हो । ठीक एक वर्षघि मैले डिएसएलआर क्यामेरा किनेपछि भने फोटो ब्लगिङ किन सुरु नगर्ने भन्ने विचार मनमा आयो । सोही अनुरुप अहिलेको ब्लगलाई फोटो ब्लगिङको माध्यम बनाएको छु । हजार शब्दको वर्णन भन्दा कहिलेकाहीँ एउटै तस्बिरले बढी महत्व राख्छ भन्ने कुराको प्रयोगात्मक अभ्यासमा छु म अहिले । निश्चय नै अहिले मेरो रुचिको विषय फोटो पत्रकारिता बन्न पुगेको छ ।
सुर्यको ब्लग फोटो ब्लगिङको नमूना ब्लग हो । यसको गृहपृष्ठमा फोटो र फोटोसँग सम्बन्धित क्याप्सनमात्र राख्ने गरेको छु । यसमा विभिन्न पृष्ठहरु निर्माण गरिएको छ । तीमध्ये महत्वपुर्ण लिंक भन्ने पेज उपयोगी पनि छ । यसमा आवश्यक परिरहने र सरकारी वेवसाइटको लिंक राखेको छु । पेजभन्दामाथि ट्याबहरुमा सोसल साइटहरु लिंक गरिएको छ । यसको मास्टहेड म आफैँले डिजाइन गरेको हुँ । यसको दाहिनेतिर रुचाइएका उत्कृष्ट दस पोस्ट, मेरो परिचय, समयसूचक घडी र हिट काउण्टर रहेका छन् । सुर्यको ब्लगलाई अझ आकर्षक रुपमा ले-आउट गर्न भने सकेको छैन ।
मैले ब्लगिङ गर्न सुरु गरेको आठ वर्षन्दा बढी भयो । सूचना प्रविधितर्फ सानैदेखिको रुचिले मलाई डिजिटल संसारमा पहिलेदेखि नै तानेको हो । म चितवनमा डिजिटल क्यामरा बोकेर हिँड्ने पहिलो पत्रकार हुँ । मैले नौ वर्षघि प्रयोग गरेको डिजिटल क्यामरामा डिस्प्ले नै थिएन । त्यसअघि मैले रिल प्रयोग गर्नुपर्ने क्यामरा पनि चलाएँ । चितवनमा ब्लग बनाएको पहिलो पत्रकार पनि सम्भवतः म नै हुनुपर्छ । मैले २०६२ सालमा अर्थात् सन् २००५ तिर लोकतन्त्र डट ब्लगस्पट डट कम भन्ने ब्लग सुरु गरेको थिएँ । त्यसमा तत्कालिन दोस्रो जनआन्दोलनका गतिविधि, तस्बिर, समाचार, कार्टुन, मुक्तक र गजल राखेको थिएँ । राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसलाई अपडेट गर्न छाडेँ । पछि त्यो ब्लग नै हरायो । सुर्यको ब्लग पनि २०१० तिर सुरु गरेको हुँ । ब्लगिङ गर्न सिक्ने क्रममै विभिन्न प्रयोग गर्दै आएपछि त्यतिबेला फेसबुकलाई काउण्टर दिन देशबुक डट ब्लगस्पट डट कम सुरु गरेँ । यसमा समसामयिक विषयमा निजी विचार राखिएको छ । गतवर्ष सुर्यको ब्लगलाई अपडेटेड रुपमा फोटो ब्लगका रुपमा परिवर्तन गरेपछि देशबुकलाई समय दिन भ्याएको छैन ।
ब्लगिङ गर्नुको एउटै फाइदा भनेको यसमा सेन्सरसीप हुँदैन । आफ्नो मालिक आफैँ भएर काम गर्न पाइन्छ । आफूलाई मन लागेको विषय, मन लागेको तरिकाले प्रस्तुत गर्न पाइन्छ । सुरुवाती दिनहरुमा अहिलेजस्तो फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सोसल मिडिया नभएकोले पनि ब्लगको छुट्टै महत्व थियो । इन्टरनेटको बृहत् जालोमा मेरो पनि एउटा वेवपेज छ, जहाँ मैले मेरा कुरा राख्न सक्छु भन्ने भावनाले नै ब्लगिङ सुरु गरेँ । छापा पत्रकारितामा क्रियाशील भएकोले कहिलेकाहीँ पत्रिकामा नछापिएका समाचार र तस्बिर ब्लगमा राख्न पाइन्छ भनेर पनि मैले ब्लग खोलेँ ।
मेरो ब्लगमा समसामयिक, सामाजिक गतिविधि, समाचारमूल्य भएको कृयाकलाप, चितवनमा आयोजना हुने महत्वपुर्ण कार्यक्रम र विशेष गरी ग्रामीण परिवेशका जीवनशैली झल्कने तस्बिर प्राथमिकतामा पर्छन् । ब्लग लेखनका लागि क्याप्सनका रुपमा सिमित शब्द हुने र फोटोबाट नै धेरै कुरा व्यक्त गर्नुपर्ने भएकोले मानिसको मन छुने खालका तस्बिर सुर्यको ब्लगले खोजिरहेको हुन्छ । तस्बिरको गुणस्तरको लागि मैले यसमा डिएसएलआरबाट खिचिएका तस्बिरमात्र समावेश गरेको छु । शब्दजस्तै तस्बिरको पनि उत्तिकै महत्व हुने भएकोले मैले समसामयिक फोटोलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु ।
लेखनका निम्ति भाषा सबैभन्दा महत्वपुर्ण र शशक्त माध्यम भएकोले ब्लगिङमा पनि यो कुरा लागु त हुन्छ नै । तर फोटो ब्लगका निम्ति हजार शब्दले बोल्न नसकेको कुरा एउटा फोटोले बोल्छ भनिन्छ । तपाँईले कसरी ब्याख्या गर्नुहुन्छ यो कुरालाई?
निश्चय नै केही फोटो यस्ता हुन्छन्, जसलाई हेरेर हामी त्यसले देखाएको विषयबस्तुलाई एक हजार शब्दमा पनि व्याख्या गर्न सक्दैनौँ, तर सबै फोटोले यसरी बोल्दैनन् । हजार शब्द बोल्ने फोटोहरु हजारौँमा एक हुने गर्छन् । सबैजसो फोटोले केही त पक्कै बोलेकै हुन्छन् । त्यसको सन्दर्भ र परिचय भने क्याप्सनले खुलाउनुपर्छ । प्राकृतिक सौन्दर्यका केही यस्ता फोटो पनि हुन्छन्, जसलाई क्याप्सनको आवश्यकता नै पर्दैन । कुनै कविले सिर्जना गरेको कविता वा कुनै चित्रकारले सिर्जना गरेको चित्रजस्तै त्यस्ता फोटोले मानिसलाई लोभ्याउँछन् पनि । थोरैमा धेरै सन्देश दिनको लागि फोटो ब्लगिङ उत्तम उपाय हो ।
राम्रो फोटो खिच्न चाहने या फोटो ब्लगर हुन चाहनेले जान्नै पर्ने कुराहरु के के हुन?
चार वर्षघि राजधानीमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको सात दिने बेसिक फोटो जर्नालिजम् तालिम लिएपछि बल्ल फोटो कसरी खिच्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई ज्ञान भयो । हामी क्यामरा समातेर सटर थिचेपछि फोटो खिचेको भन्ने भ्रममा हुन्छौँ । वास्तवमा फोटो खिच्नु भनेको फोटोको कम्पोजिसन र प्रकाशको संयोजन हो । कस्तो प्रकाशमा फोटो खिच्दा कुन कोणबाट खिच्ने भन्ने कुराले फोटोग्राफीमा निकै महत्व राख्छ । कुनै पनि फोटो खिच्दा फोटोको फ्रेमभित्र के कति विषयबस्तु समेट्ने भन्ने कुरा फोटो केका लागि खिचिँदैछ र यसको सन्देश के हो भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । अनुहारको भाव देखाउन क्लोज अप सट लिनुपर्ने हुन्छ भने प्राकृतिक दृश्यलाई लोभलाग्दो बनाउन वाइड सटको ल्याण्डस्केप चाहिन्छ ।
राम्रो फोटो खिच्न वा फोटो ब्लगर हुन चाहनेले जान्नै पर्ने कुरा भनेका फोटोग्राफीको आधारभूत ज्ञान नै हो । हामीले सामान्य खालका कम्प्याक्ट डिजिटल क्यामराबाट पनि राम्रा तस्बिर लिन सक्छौँ । फोटोग्राफीमा स्थान, समय, प्रकाश र कम्पोजिसन (रचना) को निकै महत्व हुन्छ । यी कुराहरुमा ध्यान दिने हो र फोटोग्राफीमा रुचि छ भने जोकोहीले फोटो ब्लगिङ गर्न सक्छन् । काम गर्दै सिक्दै जाने त हो । अभ्यासले नै मानिसलाई अन्ततः पुर्णतातर्फ अगाडि बढाउँछ ।
फोटो बाहेक तपाँईको अर्को ब्लगिङको रुची के हो?
सोसल मिडियाको बढ्दो प्रभावले अहिले धेरैले ब्लगमा समय खर्च गर्न छाडेको जस्तो लाग्छ । ब्लगमा लामा गन्थनहरु पढ्नभन्दा ट्वीट र स्टाटस पढ्ने बानीको विकास भएको छ । त्यसैले अबका ब्लग संक्षिप्त खालका रचनायुक्त हुनुपर्छ । मैले ब्लगमै उपन्यासका ठेली पनि भेटाएको छु, त्यत्रो सामग्री पढ्ने फूर्सद कसलाई पो हुन्छ र अहिले ! त्यसैले मैले छोटा सामग्री नै रुचाउँछु ब्लगमा । फोटोबाहेक मेरो ब्लगिङको रुचि निजी विचार र भावनाहरु नै हुन् । मैले देशबुकमा समसामयिक विषयमा निजी विचार पोस्ट गर्ने गरेको छु, पछिल्लो समयमा यो क्रममा केही गतिरोध आएको छ ।
नेपाली ब्लगले भाषाको कारण धेरै रिडर वा भिजिटर पाउन सकेका छैनन् । विश्वमा नेपाली भाषी हामी कति नै छौँ र ! तर, मुख्य कुरा धेरै भिजिटरभन्दा पनि लक्षित भिजिटर हुनुपर्छ । यस हिसाबले नेपाली ब्लग सफल नै छन् भन्ने ठानेको छु । पहिलेजस्तो ब्लगिङ कल्चर अहिले अलि कम भएको हो कि भन्ने मेरो ठम्याई छ । जहाँसम्म सोसल मिडियाको कुरा छ, अहिले हामीहरु कोहीपनि सोसल मिडियाबाट अछुतो रहन सक्ने अवस्था छैन । हामीले सोसल मिडियालाई जति उपयोग गर्नु पर्ने हो, त्यति उपयोग भने गर्न सकेका छैनौँ । अहिले धेरैजसो सूचना सबैभन्दा पहिले सोसल मिडियामा उपलब्ध हुन थालेका छन्, यसको प्रामाणिकता परीक्षण गरेर यस्ता सूचना प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
फुर्सदको समयमा अरुका ब्लग पनि हेर्ने गरेको छु । मैले फुर्सदमा पढ्ने गरेका ब्लगहरुमा मेरोरिपोर्ट, निफिरि, माइसंसार, मिडिया नेट, बाबाजी विचार, नमस्ते बिहानी, देशबुक आदि नै हुन् ।
भाषागत रुपमा सबल र विषयगत हिसाबले समसामयिकता बोकेका ब्लग मलाई मनपर्छ । मिथ्या आरोप र काल्पनिक कहानीभन्दा पनि वास्तविक सामाजिक धरातललाई टेकेर बहस निम्त्याउने खालका विचारको प्रस्तुति ब्लगमा आउनुपर्छ ।
मेरो विचारमा ब्लगलाई आचारसंहितामा बाँध्न आवश्यक छैन । ब्लग भनेकै बन्धनविहीन, भयमुक्त, अवरोधविहीन विचार अभिव्यक्ति गर्ने प्लेटफर्म हो भन्ने मेरो बुझाई छ । के लेख्न हुन्छ, कति लेख्न हुन्छ, के लेख्न हुँदैन भन्ने ज्ञान ब्लगरहरुलाई थाहा नभएको होइन, हामी सबैलाई थाहा छ । फरक यत्ति हो, हामी आत्मअनुशासनमा कति बसेका छौँ? चलाउनेले त पोर्न साइट पनि चलाएकै छन् नि, सेतोपाटीलाई निलोपाटीले असर पार्छ र ! मैले समाजलाई के दिने भन्ने कुरा मैले नै निर्धारण गर्ने हो ।
त्यसोभए अरुले तपाँईले भनेजस्तो आत्मानुशासन कत्तिको पालना भएको पाउनुभएको छ त?
राज्यको कुनै निकायमा दर्ता गरेर चलाउनु पर्ने मिडिया र ब्लग फरक कुरा हुन् । मिडियाकै दर्जामा ब्लग पुग्न सक्दैन, र ब्लगमा जस्तो स्वच्छन्दता मिडियामा हुन सक्दैन । कुनै पनि ब्लगले सामाजिक आचरण विरुद्धका सामग्री भने प्रस्तुत गर्नुहुँदैन । केही ब्लगहरुले रक्तपातपुर्ण विभत्स तस्बीर पोस्ट गर्ने, पीडितलाई थप पीडा दिने सामग्री दिने गरेको पाएको छु । यस्ता गल्ती कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका कुनै रमाइला घटना वा प्रसंग भए बताइदिनुस् न ।
एउटा प्रसंग जोड्न मन लाग्यो । केही महिनाअघि चितवनमा स्काउटको ज्याम्बोरी भएको थियो । त्यसको उद्घाटनमा नृत्य प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थीको तस्बिर मैले सुर्यको ब्लगमा राखेको थिएँ । मेरो त्यही तस्बिर मलाई क्रेडिट नदिइकनै एउटा एफएमले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको रहेछ । त्यो देख्दा मन खिन्न भयो । मैले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र मिडियाले सुर्यको ब्लगमा रहेका तस्बिर प्रयोग गरुन् भनेर स्पष्ट रुपमा फोटोः सुर्यप्रकाश कँडेल वा सुर्यको ब्लग लेखेर प्रयोग गर्न सकिने भनी ब्लगमै लेखिदिएको छु । सामान्यज्ञानकै आधारमा पनि अर्काले खिचेको फोटो प्रयोग गर्दा क्रेडिट दिनुपर्छ । तर मिडिया चलाउनेले नै अटेर गरेको त्यो घटना मैले बिर्सेको छैन ।
तपाइ सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसलमिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो?
ब्लग समुद्र हो, फेसबुक नदी र ट्वीटर सुन्दर तलाउ । तलाउमा सानो ढुंगा खस्दा पनि तरंग उत्पन्न हुन्छ, ट्वीटरका ट्वीट त्यस्तै हुन्छन् । नदीमा कहिलेकाहीँ बाढी पनि आउँछ, बाढीले राम्रा, नराम्रा सबै कुरा ल्याउँछ, फेसबुक अहिले त्यस्तै भएको छ । ब्लग भने सबैकुरा जम्मा हुने विशाल महासागर हो, जहाँ जतिपनि कुराहरु हुन्छन् र यसको यात्रा गर्न समय पनि उत्तिकै लाग्छ ।
नेपाली ब्लगहरु सामाजिक हितमा लेखिएका कत्तिको पाउनुभएको छ?
व्यक्तिगत भावना साटासाटको माध्यमका रुपमा नेपालमा सुरु भएको ब्लगिङ पछिल्लो समयमा सामाजिक हितका लागि क्रियाशील हुन थालेको आभाष हुन्छ । केही ब्लगले अरुका सामग्री कपी, पेस्ट गरेरै पनि आत्मरतिमा भुलेका छन् । यस्ता अपवादबाहेक नेपाली ब्लगमा आफ्ना सिर्जना, समसामयिक विषयबस्तुको प्रस्तुति र केही बहसका विषय पनि आउने गरेका छन् ।
ब्लगिङ गरेर पाएको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि केही छ?
नितान्त निजी हिसाबले ब्लग सुरु गरेको थिएँ मैले । पछिल्लो समयमा फोटो ब्लगिङ सुरु गरेपछि भने यो निजी विषयबस्तु रहेन । विशेषगरी स्थानीय स्तरका मिडिया सञ्चालकले तस्बिरका लागि खर्च गर्ने परिपाटी कम भएकोले स्थानीय मिडियामा तस्बिरको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले सुर्यको ब्लग सुरु गरेको हुँ । केही स्थानीय दैनिक पत्रिकाले सुर्यको ब्लगबाट गुणस्तरीय तस्बिरहरु लिएर क्रेडिट दिँदै पत्रिकामा छाप्न थालेका छन् । हरेक सिर्जनाको सर्जकलाई क्रेडिट दिनुपर्छ । मैले चाहेको पनि यत्ति नै हो । मैले ब्लगिङ गरेर पाएको ठूलो उपलब्धि साताको ब्लगर हुनुलाई नै मानेको छु ।
ब्लगिङमात्र होइन, अब त सोसल साइटहरु पनि नागरिक पत्रकारिताका रुपमा परिवर्तित हुँदैछन् । कतै दुर्घटना भयो भने सबैभन्दा पहिले सोसल साइटमा त्यसको तस्विर भेटाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल सजाय काटेर छुटेका खुमबहादुर खड्कालाई एक क्वीण्टलको माला लगाउने भीडको तस्बिर मैले सबैभन्दा पहिले फेसबुकमा देखेको थिएँ । अहिले प्रविधिले नागरिकलाई सूचनासँग खेल्न सिकाएको छ, त्यसैले ब्लगिङमात्र होइन, केही सोसल साइटहरुमा नागरिक पत्रकारिताको गन्ध पाइन्छ । ब्लगिङलाई नागरिक पत्रकारिताको रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ, अहिले नै त्यो अवस्थामा भने पुगिएको छैन ।
अझै पनि धेरै नेपाली ब्लग, ब्लगिङ र ब्लगर शब्दसँग परिचित हुन नसकेको वर्तमानमा मेरो रिपोर्टले नियमित रुपमा साताको ब्लगर प्रस्तुत गर्दै आउनु निकै प्रशंसायोग्य काम हो । यसले हरेक ब्लगरलाई आफ्नो कर्मक्षेत्रमा नियमितरुपमा खटिइरहन प्रेरणा प्राप्त हुन्छ । नेपाली ब्लगको दुनियाँमा मेरो रिपोर्ट अग्रपंक्तिमा रहिरहोस्, मेरो शुभकामना ।